Nagu saabsan - Chengdu Dien Photoelectric Technology Co., Ltd.
Waad ku mahadsantahay doorashada DIEN TECH! Waxaan nahay soo saare xirfadle ah iyo alaab-qeybiye taxane ah oo ku saleysan mad-madow! Waxaan diirada saareynaa codsiyada macaamilka waxaanan horumarineynaa nafteena iyadoo la tixraacayo taas oo keeni karta khibrad fiican oo wadashaqeyn ah.DIEN TECH, waxaan aad u xiiseyneynaa inaan kaqeyb galno macaamiisheena mashaariicda cilmi baarista iyo sahaminta tikniyoolajiyad cusub taasoo horseedeysa heer cusub oo codsi macaamiisheena ah. . Waxaan had iyo jeer wax ka baranaa wixii aan sameynay oo aan nafteena u hiillinaa si aan wax u sii wanaajinno. Halkan DIEN, waxaan ku dooranaynaa kooxdeena heerar furan oo adag, waxaan leenahay Dhakhaatiir ku howlan koritaanka baalasha muddo ka badan 12 sano waxayna noo keenaan lama filaan annaga iyo tan macaamiisha, waxaan leenahay saaxiibo ku fiican dhageysiga iyo wax ka barashada shaqooyinka iskuna dayaan inay qani ku noqdaan khibradooda si ay si fiican u fahmaan macaamiisha.
-Leon Lee Agaasime guud
Diyaar ma u tahay inaad waxbadan barato? Nala soo xiriir maanta qiime bilaash ah!
Shirkad tiknoolajiyadeed oo dhallin yaro ah, kana tirsan tamarta, DIEN TECH waxay ku takhasustay cilmi-baarista, nashqadeynta, soo saaridda iyo iibinta taxane ka kooban kiristaalo indhaha oo aan toos ahayn, kiristaalo laysar ah, kiristaalo magneto-optic ah iyo waxyaabo hoose. Waxyaalo tayo sare leh iyo xubno tartan ah ayaa si duurjoog ah loogu dabaqayaa dacwadaha sayniska, quruxda iyo suuqyada warshadaha. Iibkeenna aadka u heellan iyo kooxaha injineernimada khibradda leh waxay si adag uga go'an tahay inay la shaqeeyaan macmiisha ka socda bilicda iyo warshadaha iyo sidoo kale bulshada cilmi baarista adduunka oo dhan si ay uga hortagaan codsiyada la habeeyay
Xitaa sii baro
Soo-saarku wuxuu buuxiyaa dhammaan shuruudaha heerarka Yurub iyo adduunka. Wadashaqeyn dhow oo lala yeesho macaamiisheenna, DIEN TECH waxay injineerada u suurta gelineysaa in ay sameeyaan sahamin horumarineed ayna soo saaraan qalab cusub oo hagaajinaya waxqabadka barnaamijyadooda. Xarunteeduna tahay Chengdu, Shiinaha, DIEN TECH oo leh koox tayo leh iyo qaybiyayaal ayaa horumariyay macaamiisha adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan USA, Europe, Asia, South Asia. Mustaqbalka, DIEN TECH ma joojin doono talaabada ay u qaadayso mid kamid ah kuwa ugu caansan uguna tayo badan shirkadaha wax soosaarka sawir-qaadaha ee adduunka.
DIEN TECH waxay u heellan tahay inay ku dhisto badeecooyinkeeda iyo xalalkeeda ballaaran, saldhiggeeda taageerada iibka kadib iyo sumcad adag oo dhex marta macaamiisheeda. Iyo in si buuxda loo buuxiyo baahiyaha macaamiisheeda iyo sidoo kale in la horumariyo qaybaha indhaha iyo aaladaha ku saleysan Crystal-ku-kalsoon.